Soatoavina malagasy… Sinoa toavina Malagasy | NewsMada
Soatoavina malagasy… Sinoa toavina Malagasy
Fatra-panaja vahiny ny Malagasy. Soatoavina malagasy izay. Dia mibosesika eto ny vahiny, miditra mora sy maro. Tena voaara-maso sy fantatra amin’izay rehetra ataony? Tompon-trano mihono ny vahoaka, tompony mangataka atiny.
Saika tsy fantatra na tsy ampahafantarina izay fifanarahana amin’izay fibosesehan’ny vahiny fanaja izay: tsy misy manontany, tsy mampiraika. Rehefa mitranga ny olana ifotony vao ikoropahana, amonoana afo, anamarinan-tena…
Jereo amin’ny “Raharaha Soamahamanina”, mahavalalanina sy mahafanina: tsy hay intsony ny marina. Mila vakina bantsilana ho fantatry ny vahoaka ny raharaha, raha tena ara-dalàna sy ananana ny marina, fa tsy atao an-kifonofono.
Amin’izany, manjaka ho azy ny honohono. Nahoana? Na matin-kenamaso amin’ny vahiny ny mpitondra… Soatoavina malagasy ny Sinoa toavina Malagasy? Na tsy tiana ho fantatra izay ambadika tany ho any: fifanarahana, varotra, takalo… ?
Manjaka ny Sinoa… toavina Malagasy, rehefa tsy mazava amin’ny sarambabem-bahoaka ny foto-draharaha: iza no manao inona? Tia kely amin’ny tombontsoa manokana ny mpitondra, tsy mahazo be ho an’ny vahoaka sy ny firenena.
Sinoa… toavina Malagasy amin’izao: manararaotra ny toerana, fotoana, olona, fitaovana, vola… araka izay farany tratrany sy azony atao. Fanambakana? Tsy misy mahalala, afa-tsy ny mpitondra nanao fifanarahana… tsy mazava (?).
Mba aiza kosa ny Malagasy toavin’ny Sinoa? Eo, ohatra, ny amin’ny raharaha ifanatrehana ifampidinihana, anaovana teny ierana, ifanajana, ifampitsinjovana… Tsy mahalala inona amin’izay ataon’ny vahiny ny tompon-tany ifotony.
Tsy mahagaga raha zary disadisa ny raharaha. Tratran’ny tian-kano tsy tian-kano, na mandeha tsy fidiny toy ny faty entina alina. Fatra-panaja vahiny ny Malagasy, fa tsy hajaina na tsy mahay manaja tena amin’izay mahamety ny tena?
Izany rehetra izany, noho ny afitsoky ny mpitondra. Tsy hita izay hoe fanjakana tan-dalàna, fitondrana tsara tantana, fitantanana mangarahara… Hatao ahoana? Na ho ela na ho haingana, tsy misy takona na afenina izay tsy ho hita.